Ndakamukwapaidza nayo nyoro pane vanhu kubhawa – Vanoda Zvinhu
Pandakdzokera ndakawana mumwe musikana aiwonekera.
Takatanga kutaura hedu zvisina maturo kwekanguva. Musikana akanditi anonzi Molly ini ndikamuudza kuti ndinonzi Rombe.
“Inga wakapihwa zita rine miyedzo”
“Ichokwadi” ndakapindura, “asi harisi zita rangu chairo, izita rekuhurisa, asi ndatogara naro kwetumakore”
Molly akaseka kunge benzi apa achishamisika
“A iwe Rombe, inga wandipedza nhasi, nditengerewo doro ndimwe hangu tichitaura”
Ndakamupa mari achibva aenda kunotenga doro. Takagara zvedu panze tichitaura nyaya. Akazondiudza kuti akange ava kuzochinja kwekushandira ave kuenda kuKopje nekuti kwakange kune mari uye mapurisa akanga asina kuwanda.
“Kuno kumaAvenues, mari yacho inonetsa kubata, kunoti mapurisa kozoti kudhura, uyezve varume vacho havadi kubhadhara apa ndinenge ndabhadhara imba yekusvirisira futi”
“Manje so, ndinobudirira sei munyika yambuya nehanda ino, dai paine mbozha inondiroora kani, inga ndakanaka wani, ende ndinonaka futiii”
Ndakabva ndaipamha kamwe kadoro nokuti ndakaona kuti rurimi rwakange rwave kureruka. Ndakadaidzira Whisky double shot.
“I we rombe wakundidhakisa manje, haute mushe iwe”
“Pora Molly, ende unotora nyama udye apa,, ko unotyei kana uineni Rombe. Handidi kukwira munhu anenzara ini” ndakatamba hangu naMolly, iye akabva anyepera kutsamwa achindirova rova pabendekete. Akabva asimuka ndokunotora nyama yehuku. Paakadzoka akamira pamberi pangu ndokutanga kutamba achikovirira zviya zvinomisa mboro, paitamba asimudzira rokwe rake mudenga zvinyoronyoro achiratidza zvidya zvake. Rimwe gomana rakanakidzwa ndokubva rauya ndokutamba richikovirira kumashure kwaMolly.
Ini ndakangoti nechemumoyo ko haisi miyedzo here nhai veduwe.
Gomana rakabva ramuti kambama ta kumagaro
Ini ndakafunga kuti Molly achashatirwa, asi akabva abata gomana riya muchiuno ndokuriisa pakati pemakumbo ake ndokutsika jaivhi iye inonzi jaivhi, vaviri vaiita kunge vari kusvirina, yembe yaMolly yakange yavamudenga zvekuti ndaitoona choya nematinji aMolly. Molly akabva arara pabhenji ndokutanga kutamba chinamwari, gomana rakabva rati karakata pamusoro paMolly ndokutanga kukovirira kunge arikutoisa chaizvo. Ini zvangu ndaive ndakangotarisa apa mboro yangu yakange yotoda kubuda mubhrugwa nekumira. Vanhu vaive padyo vaiomberera vamwe vachidaidzira kuti
“Isa John, beche ravhurwa”
Kadance kakazopera Molly ndokugara pakumbo angu akanditarisa achidya nyama yake
“Ko Rombe hona ndatotota, bhudhi vanga vachitamba neni vanezimboro ende ranga rakamira kuti twa, ndanga ndava kutoda kuti vandiise tichitamba ipapa, nhai wakambozvidzwawo here nhai Rombe”
“Ehe ndakambozvinzwa” Molly akabva apatika kuseka
“Rombe unondipedza mhani” akadaro achivhura zipi yebhurugwa rangu. Akabva asebera pamberi achibva aisa burugwa rake paside achisya beche riripachena. Akabata mboro yangu ndokuiburitsa mubhurugwa, akabva aivhara nehembe yake ndokutanga kuipurizira achiita kunge arikundichaya bonyora. Ini zvangu ndiri zii, apa ndaitoshamisika nezviitwa naMolly uye zve ndichinakirwa. Izvi zaiitika panze pamabhenji akange ari pasi pemuti.
Molly akabva abata mboro yangu achibva anzwa kutsvedzerera neuronyo hwezemo achiva atoita manyemwe. Akatanga kugumisa mboro yangu matinji ake zvinyoro nyoro. Aifunga kuti ndichamurambidza nekuti ndakaknge ndisina kupfeka condom, asi iniwo zvenyama nenyama ndizvo zvandaifarirawo. Ndakanzwa mboro ichiiswa mubeche, kusvika yapinda yese. Beche rakange rakatota, ndakanzwa kudziirwa uye Molly achibva atanga kusunga nyama dzebeche dzichiruma ruma mboro. Akati kovi kovi, ndokumira, ndokuti kovi kovi kovi ndokumira, achibva aisvomhora ndokuipukuta nehembe yake. Akaidzorera futi ndokuiruka akaigarira. Ndakanyatso misa gotsi nekunakirwa. Takagara takadaro kwekanguva, ndichibva ndazodzwa magaro aMolly asunga maziso akavharwa achibva andibatirira zvakasimba kunge simbi chaiyo, akabva atunda akadaro ndokutotesa bhurugwa rangu rese.
“Iwe Rombe unoda kundizadza mukondombera here, haunyare kuisa pakazara vanhu”
Ndakabva ndamubata chiuno ndichipuruzira zamu rake. “Ende Molly wandikaurisa wena, uye unoziva kugadzirisa murume, unoziva kutamba nemboro”
“A iwe ndisiye zvangu ndaita sei apa”
Ndakadaidzira imwe Double Whisky nekuti ndakaona kuti yaindiwanisa sviro yakapenga.
Next story Kukwirwa naStavo Benzi repamaShops!
Previous story I am married but vakandisejusa, ndokundikwira mudhara ivavo